Nezvedu - Hebei Yakanakisa Fekitori
Hebei Yakanakisa Fekitori. mugadziri akasarudzika uye mutengesi wemarble bronze uye yakakanda zvinhu zvesimbi ane makore makumi matatu ezviitiko. Kambani yedu iri muShijiazhuang guta, Hebei dunhu reChina.
Yedu huru chiyero chebhizinesi mhando dzese dzematombo uye zvigadzirwa zvebronze zvinosanganisira zviyero zvekumabvazuva nekumadokero, mhuka, zvifananidzo, bust statuette, maruva mapoto, makoramu, matsime, gazeboes, nzvimbo yemoto uye zvidiki zvipo zvekupa. simbi zvigadzirwa zvinosanganisira gazebo, fenzi .gate, uye mwenje. Isu tinofara kutora maodha zvinoenderana nemasampuli kana vanodhirowa kubva kwauri.
Isu tinogara tichisimbirira musimboti wekubatsirana pamwe nekukura pamwechete. Zvese zvigadzirwa zvedu zvinotengesa mushe pasirese, kusanganisira Europe, America, Asia, Australia neSouth Africa, zvachose nyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu.
Tinoshuva nemoyo wese kushandira pamwe nevekunze uye vatengi kunze kwehunyanzvi. Tinoda kukupa zvinogutsa zvigadzirwa pamwe neyedu yepamusoro sevhisi.
Hebei Ideal Arts kambani iri muQuyang County, Hebei Province, inozivikanwa se "kumusha kwekuChina chivezwa"
Iyo fekitori yakavambwa muna 1985. Parizvino, isu tine makore makumi matatu nemashanu ekugadzira uye yekutengesa ruzivo.
Kubva pamusangano wekutanga wemhuri kusvika kufekitori yemazuva ano. Isu tinotenda zvikuru kune vatsva nevakuru vashanyi nerutsigiro rwavo nerubatsiro.
Fekitori yedu ikozvino ine chaiyo yekugadzira uye yekutengesa system.
Dhizaini yedhipatimendi, modhi inogadzira modhi. Raw zvinhu sarudzo yedhipatimendi. Dhizaini yekugadzira. Makorari dhipatimendi. Dhipatimendi rekugamuchira. Uye yekupedzisira kavha dhipatimendi.
Dhipatimendi rega rega rine mutungamiri wechikwata ane anopfuura makore gumi neshanu ezviitiko zvebasa. Maitiro ese ekugadzira anonyatsodikanwa. Neiyi nzira chete tinogona kuona kuti vatengi vanowana zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Mumakore achangopfuura. Kuitira kuwedzera bhizinesi rayo rekunze. Parizvino, isu takasimbisa kwenguva refu uye kugadzikana kubatana nevatengi vanobva kuFrance, United States, Italy, Russia, Switzerland, Qatar, Saudi Arabia, South Korea nedzimwe nyika. Uye kupedza vatengi mune dzimwe nyika zvakare tenga mufekitori yedu Uye tanga shamwari, mhuri, vavakidzani kwatiri.
Isu takawana chiremerera chepamusoro chesarudzo yedu yezvinhu uye kugona kukuru.
"Hunhu itsika yedu" Basa rega rega rehunyanzvi rine rayo nyaya. Chigadzirwa chega chega chatinogadzira chinotariswa nekugadziriswa kazhinji. Nguva dzese dzatinogamuchira mhinduro inogutsa kubva kune vatengi vedu. Isu tiri kufara sevashanyi.
Kana iwe uchida zvigadzirwa zvedu. Usazeza kutirovera runhare. Tiri nguva dzose kubasa kwako. Chinangwa chedu ndecheku "ita pasi rose rudo rwakaitwa muChina"